Machadka Al-Faaruuq ee Magaalada Gaalkacyo oo Sanad Dugsiyeed Cusub uu u bilowday (Sawirro) | Machadka Al-Faaruuq ee Magaalada Gaalkacyo oo Sanad Dugsiyeed Cusub uu u bilowday (Sawirro) – Latest News
« Kahn, Loon beat back primary challengers
War Deg Deg Ah: Cali Khaliif oo noqday Madaxweynaha Maamulka Khaatumo »
Machadka Al-Faaruuq ee Magaalada Gaalkacyo oo Sanad Dugsiyeed Cusub uu u bilowday (Sawirro)
Published August 14, 2014 | By gtimes
Galkacyo (GT) Kadib fasixii Mudada Xagaaga ah ayaa Machadka Al-Faaruuq ee Daraasaatka Islaamka iyo Luqada Carabiga oo Hoostaga Raabidada Macaahida Sharciga ah ee Soomaaliyana kuna yaala Magaalada Gaalkacyo waxaa uu isbuucaan dib u bilaabay Hawlihii Waxbarasho ee Sanad Dugsiyeedka 2014-2015. Waxaana Dhamaan Ardaydii Fasalada kala duwan ee
Machadka ay haatan si toos ah u qaadanayaan Xiisadaha kala duwan ee
Furitaan Machadka ee Sanad Dugsiyeedkaan ayaa waxaa ka hadlay Maamulaha Machadka Sh. Cilmi Yusuf Axmed waxaana uu ardayda kusoo dhaweeyay Sanad Dugsiyeedkaan Bilowday isaga oo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in ilaahay uu dib isugusoo celiyay kadib fasixii la galay.
Sh. Ahmed Dheeli oo kamid ah Culimada ugu caansan Gobolka Mudug oo isaga kasoo qayb galay Furitaanka Machadka ee Sanad Dugsiyeedka ayaa waxaa uu Ardayda usoo jeediyay Dardaarano kala duwan oo ku aadan Waxbarashada waxaana ugu Muhiim sanaa :-
1.In ay Taqwo layimaadaan ama Alle ka cabsi laga helo.
2.Inay ay aqoonta ku dadaalaan si ay Naftooda u anfacaan Bulshadoodana
wax u taraan.
3.Inay ku sifoobaan Tilmaamaha Ardayda Guulaysta oo ah (ku dadaalida
Daacada Alle , Dadaal iyo Han sare).
4.Inay yeeshaan Han sare oo ay ku fakaraan sidii ay Umada uga saari
lahaayeen Dhibaatada haysata.
5.Inay ka fogaadaan Mushkiladaha Dhalinyarada in badan oo kamid ah
haysata , oo ay asal u tahay Macaasidu.
Machadka Al-Faaruuq waxaa la aasaasay 2006 waxaana uu ka koobanyahay Heerarka Dugsiga Dhexe iyo Sare . waxaana lagu bartaa Shareecada Islaamka Manhajkiisuna waa Manhaj Carabi ah oo ay qaataan Macaahida hoos taga Jaamacadaha Sucuudiga ugu caansan sida Jaamacatu Imaam Sacuud iyo Jaamacatul Islaamiyaha. Macalimiinta ka hawlgalana Waa
heer Jaamacadeed Dhamaantood.
Machadka Sanad Dugsiyeedkaan waxaa lagusoo kordhiyay Qaybta Dadka waaweyn oo Xiliga Galabtii la dhigto , iyadoo Dugsiga Dhexana lagusoo daray Maadamada Culuumta si loosoo saaro Dhakhaatiir Qalbiga iyo Jirkabada Dadka ka daawaysa.
Machadka ayaa waxaa uu kaalin wayn kaga jiraan Dardar galinta Dacwada Salafiga ah ee Gobolka Mudug isaga oo soo saaray Ducaad aan tiradooda lasoo koobi karin oo Dacwada Xagga Alle ka faafiyada Daafaha Gobolka.
Waxaana Xusid mudan in Ardaydii kabaxday Qaar kamida ay haatan ka hawl galaan Machadka oo ay Macalimiin ka yihiin kadib markii ay Jaamacadaha Soo dhameeyeen.
Ardayda kabaxday Machadka oo ka kooban 7 lood ama Dufcadood ayaa waxaa
ay leeyihiin Urur ama Munadamo kulmiso oo ay u dhiseen Maamul kala danbayn leh si ay ugu fududaato inay si nidaamsan Dacwada uga qayb qaataan.